Ukuze sithole isimo sezomnotho sisonke kufanele kube ekuhlanganisweni (fingqa) isikhundla umnotho yenhlangano ngayinye. Ngakho, kungenzeka ukuhlonza izinkomba kwezibalo ukuthi kuyakuba izimpawu Imininingwane ukukhiqizwa nomphakathi. Lezi zibalo ngokuthi komnotho omkhulu. Ngakwelinye ihlangothi, inhlanganisela yabo yakha uhlelo lwama-akhawunti kazwelonke.
Ukuze kuleyo ngxenye sibalo GNP ukuthi labantu isimo zingase zisebenzise, ngaphandle ikhumbula ukwehla kwentengo izakhiwo, izakhiwo, imishini, imishini, kufanele emalini GNP kwentengo. Imiphumela iba yinhlanganisela yokukhandleka net yomkhiqizo kazwelonke (NNP).
Ukusebenzisa le nkomba Kwenziwa yokukala umthamo ingqikithi yezimpahla nezinkonzo ezikhiqizwa e isimiso sezomnotho wonke, ehlanganisa amafemu ezahlukene, ukukhiqizwa, izinkampani zakwamanye amazwe, imizi, ogama eyalandela aliholeli ukwehla zokukhiqiza umthamo yezwe.
Net umkhiqizo kazwelonke - kuyinto isamba yezimpahla nezinkonzo (wenza) futhi esetshenziswa (ukusetshenziswa) labantu isikhathi esithile. Isikhathi kufanele, njengoba umthetho, ngonyaka.
Net umkhiqizo kazwelonke kunqunywa ngezindlela eziningana. Nge indlela yokuqala wenziwa ukukhupha ukwehla izindleko GNP. Ingabe sisuswe okwedlulele izindleko umkhiqizo wezwe, okuyinto baye baya isinxephezelo kakade esetshenziswa dolobha.
Eyesibili indlela ukusungulwa yokufuna kubiza izingxenye NNP main. Phakathi izingxenye eziyinhloko ezakha net yomkhiqizo kazwelonke, kukhona izindleko isimo ukuthenga izinto zokusetshenziswa kanye nemikhiqizo ilinganiselwa batsengi nezinye izakhamuzi.
NNP kuveza izindleko isamba GNP, okuyinto senzelwe ukusetshenziswa umphakathi. Ngesikhathi esifanayo in the net yomkhiqizo kazwelonke wabeka intela ahlukahlukene ukuthi ningaweli ngqo nomkhakha umthengi sabantu. Ngokuvamile, lezi Imali zihlanganisa mkhuba izintela imisebenzi namasiko. Intela engaqondile abhekwa izakhi kuphela azibonisi bezikhali kweqiniso kwezomnotho yesibambiso ku NNP.
Net umkhiqizo kazwelonke futhi engenayo kuzwelonke (ND)
Uma ubamba izintela engaqondile kuzo zonke NNP ivolumu inkomba livela ND. engenayo National inani ngesikhathi okudalwe phakathi nonyaka. Lokhu value ibonisa yokuthi ukungezwa ku inhlalakahle yomphakathi ngokusebenzisa ukukhiqizwa esikhathini samanje (ngonyaka). Kulesisimo-ke, kulesi sibalo ingeniso kazwelonke akusho acabangele inani intela engaqondile, ukwehla, ukuxhaswa uHulumeni. Lesi sibalo okuholela iyona "net pay imali" labantu. engenayo National kubhekwa, Ngakho-ke, okubaluleke kakhulu inkomba komnotho omkhulu futhi, ngakho-ke, ngokuvamile elisetshenziswa Luhlatiyo.
Ngo umkhuba kwezomnotho ukuhlukanisa esetshenziswa futhi ekhiqizwa LP.
Imali kazwelonke ubhekwa wawuqeda wonke lo mqulu amasevisi okudalwe futhi izimpahla. ND esetshenziselwa ekuqongeleleni kanye ukusetshenziswa ingumkhiqizo we LP ngaphandle yokulahlekelwa (umonakalo ngesikhathi ezokuthutha, isitoreji, kusukela imisebenzi yezempi, ngo inani ukwakhiwa kuyaqhubeka, ezinhlekeleleni zemvelo nokunye.) Futhi ibhalansi ukuhweba.
I LP kufakwe imikhiqizo yezinto ezibonakalayo. ukukhiqizwa indulungu izindleko izimpahla amasevisi. Ngokuhambisana indlela international isilinganiso kwezibalo umehluko bobukhulu ngaphakathi kwezinombolo ingeniso kazwelonke futhi umkhiqizo wonyaka wonke ohlangene iyona izabelo ukwehla kwezindleko.
Bezingoma Ukubalwa kwabantu: bangaki izakhamuzi eCrimea?
Isilinganiso zamadoda nabesifazane eRussia Amaphesenti
Zonke izinkanyezi Dzho Flenigan